Ny adidy sy ny fiombonana eo amin’ny FJKM – FJKM Ambavahadimitafo Ny adidy sy ny fiombonana eo amin’ny FJKM |
Ny adidy sy ny fiombonana eo amin’ny FJKM
Hisy fampianarana arahina fanontaniana hotarihin’ny mpitandrina Rakotoarivony Hubert eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo, ny alahady 29 septambra 2013
mandritra ny fotoam-pivavahana maraina. Ny lohahevitra hodinihina amin’izany dia ny hoe : « Ny adidy sy ny fiombonana eo amin’ny FJKM ».
Izy io dia fampianarana nentina tany amin’ny Recyclage pastorale, ka tsara tokoa raha mandray izany fomba fisaina izany mba hialana amin’ny lasin-tsaina vaovao.
Anjarany izay nanoratra ny boky no hitondra izany amintsika, rehefa nanaiky am-pitiavana izy hitondra izany.
Ny mpitandrina Rakotoarivony Hubert dia talen’ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izy, sady birao mpanolo-tsaina ao amin’ny Birao mpiandraikitra Foibe FJKM.